यो साताभरि सुन र चाँदीको भाउमा कस्तो उतारचढाव देखियो ? हेर्नुस् Bizshala -
काठमाण्डौ । सुनको भाउ यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार हिजोको तेलनामा तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७५ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ७४ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो बिहीबार सुनको प्रतितोला छापावाल ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७४ हजार ७०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
नेपाली बजारमा हिजो बिहीबार पनि सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेको थियो । कारोबारको चौथो दिन बुधबार सुन प्रतितोला छापावाल ७४ हजार ८०० रुपैयाँ र तेजाबी ७४ हजार ५०० रुपैयाँ थियो । बुधबार सुनको भाउमा एकैपटक तोलामा ५०० रुपैयाँको गिरावट आएको थियो ।
गत मंगलबार भने तोलमा ३०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन ७५ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी ७५ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो । कारोबारको पहिलो र दोस्रो दिन आइतबार तथा सोमबार सुनको भाउ प्रतितोला छापावाल ७५ हजार रुपैयाँ र तेजाबी ७४ हजार ७०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
समग्रमा यो साता सुनको भाउ प्रतितोला २०० रुपैयाँले बढेको महासंघले जनाएको छ ।
चाँदीको भाउ भने कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार स्थिर रहँदै प्रतितोला ८८५ रुपैयाँ नै कायम रह्यो । समग्रमा यो साता चाँदीको भाउ भने तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार चाँदीको भाउ प्रतितोला ८९० रुपैयाँ थियो ।
सुनको भाउले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै, प्रतितोला रु. ७७ हजार
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड...
नेपालकै इतिहासमा सुनको भाउ नयाँ उचाइमा, प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउले मंगलबार रेकर्ड बनाउँदै नयाँ...
सुन र चाँदीको भाउ फेरि उकालो लग्यो, प्रतितोला कति ?
काठमाण्डौ । लगातार घटिरहेको सुनको भाउ यो साता कारोबारको पाँचौँ दिन...
सुनको भाउ आज पनि घट्यो, समग्रमा यो महिना तोलामा रु. १ हजार बढ्यो
काठमाण्डौ । यो साता चौथो कारोबार दिन बुधबार सुनको भाउमा गिरावट आएको...
सुनको भाउ थोरै घट्यो, चाँदीको मूल्य स्थिर
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको भाउ थोरै...
सुनको भाउ बढेको बढ्यै, आज तोलाको कति ?
काठमाण्डौ । बढ्दो सुनको भाउले यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार...
कारोबारको अन्तिम दिन सुनको भाउ फेरि चम्कियो, समग्रमा यो साता
काठमाण्डौ । यो साता कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ तोलामा...
फेरि सर्वाधिक उचाइमा सुनको भाउ, पुग्ला त तोलाकै रु. ९४ हजार ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको...